Jelly Bean 4.1.1 Changelog လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ | Phyo Chan
HomeAboutဒီ Page ကရေးထားသောအကြောင်းအရာများကြောင့် Root လုပ်ခြင်းနှင့် Custom Rom တင်ခြင်းသည် သင်သဘောသာဖြစ်သည်။Comment ပေးချင်း Like လုပ်ခြင်းဖြင့် ကူညီပါ။
Live Chat	Chat with Phyo Chan
Recent Posts	Mobile software doctor အသစ်ထောင်လိုက်ပြီ သူငယ်ချင်းတို့ရေ…………….
Sony Xperia ဖုန်းတွေ Firmware ပြန်တင်နည်း
Jelly Bean 4.1.1 Changelog လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Phone များ Version 2.3.X မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း
August 25, 2012 by ဖြိုးချမ်း	0
This entry was posted in ဗဟုသုတ. Bookmark the permalink.
← Samsung Galaxy Phone များ Version 2.3.X မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း	Sony Xperia ဖုန်းတွေ Firmware ပြန်တင်နည်း →
Comment ပေးပြီး Like လုပ်ပေးရင်အမောပြေပါတယ်။ဖြိုးချမ်းMobile software doctor အသစ်ထောင်လိုက်ပြီ သူငယ်ချင်းတို့ရေ…………….Sony Xperia Ray ST18i ကို Firmware Upgrade 4.0.3 ICS တင်နည်းSony Xperia ဖုန်းတွေ Firmware ပြန်တင်နည်းJelly Bean 4.1.1 Changelog လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Samsung Galaxy Phone များ Version 2.3.X မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းC 8812 (KERNEL VERSION–00026)(V100R001C92B921)(China Telecom) ကို unlockbootloader လုပ်နည်း နှင့် Root လုပ်နည်းC8812 4.0.X (ICS) ကို Root လုပ်နည်း နှင့် U8818 ကို Root လုပ်နည်းBattleField Bad Company2 (HD Game)ပိန်သူဝဖြိုးအလှတိုးမဲ့ App တစ်ခုပါ။Hero Taticsလူကြည့်အများဆုံး Post များ	Mobile software doctor အသစ်ထောင်လိုက်ပြီ သူငယ်ချင်းတို့ရေ................	Oppo X9015 (Thai Brand) ကို Root လုပ်နည်း Version 2.3.6	Sony Xperia ဖုန်းတွေ Firmware ပြန်တင်နည်း	Sony Xperia Ray ST18i ကို Firmware Upgrade 4.0.3 ICS တင်နည်း	လာရောက်လေ့လာသူစုစုပေါင်း	23,931 Facebook မှာ Like လုပ်ပြီးကူညီပါ။	Facebook မှာ Like လုပ်ပြီးကူညီပါ။